Steam OS: Valve wuxuu ku dhawaaqayaa Linux Linux gaar ah | Laga soo bilaabo Linux
Steam OS: Valve wuxuu ku dhawaaqayaa Linux distro u gaar ah
Sida haddii xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Linux iyo Steam uusan ku filneyn, hadda Valve ayaa ku dhawaaqeysa Linux kuu gaar ah distro:
SteamOS wuxuu isku daraa qaabdhismeedka adag ee Linux oo leh khibrad ciyaar oo loo dhisay shaashadda weyn.
Waxaa la heli doonaa goor dhow iyada oo ah nidaam hawlgal oo keli ah oo bilaash ah mashiinnada qolka fadhiga.
Waxay u egtahay mid rajo leh, oo sidee ayuu horumarku noqon doonaa?
Steam ma aha kanaal warbaahineed oo hal dhinac ah, waa madal madadaalo oo dad badani iskaashadaan, halkaas oo kaqeybgale kastaa qayb ka yahay qalabka ka dhigaya khibrada wanaagsan ee inta kale oo dhan ka shaqeysa. On SteamOS, "maskax furan" macnaheedu waa in warshadaha qalabka ay la falgalaan qolka fadhiga aad uga dhakhso badan sidii ay waligood awood u lahaayeen ka hor. Abuureyaasha maaddada waxay awood u yeelan doonaan inay si toos ah ula xiriiraan macaamiishooda. Isticmaalayaashu waxay awoodi doonaan inay wax ka beddelaan ama beddelaan qayb kasta oo ka mid ah software-ka ama qalabka sida ay doonaan. Ciyaartoydu waxay awoodi doonaan inay kaqeybqaataan horumarinta cayaaraha ay jecelyihiin. SteamOS wuu sii wadi doonaa inuu isbeddelo laakiin wuxuu had iyo jeer ilaalin doonaa jawi loogu talagalay in lagu kobciyo noocan cusub ee hal-abuurnimada.
Aad u rajo badan …… Oo maxay noo keeni doontaa waxyaabo kale?
Waxaad sidoo kale ku ciyaari kartaa dhamaan barnaamijyadaada Windows iyo Mac mashiinkaaga SteamOS. Si fudud u daar kombiyuutarkaaga una socodsiiya Steam sidii aad horayba u baran jirtay - markaa mashiinkaaga SteamOS wuxuu awoodi doonaa inuu si toos ah TV-yada uga sii daayo ciyaarahaas shabakaddaada!
Muusig, TV, Filim
Waxaan la shaqeyneynaa qaar badan oo ka mid ah adeegyada warbaahinta oo aad horey u taqaanay oo aad jeceshahay. Goor dhow, waxaan bilaabi doonnaa isdhexgalkooda qadka, taasoo kuu oggolaaneysa inaad marin u hesho heesaha iyo fiidiyowyada aad jeceshahay Steam iyo SteamOS.
La wadaag qoyska
Waagii hore, la ciyaarida xubnahaaga qoyska way adkayd. Hada waxaad la wadaagi kartaa cayaaraha aad jeceshahay dadka aad jeceshahay. Wadaagista Qoyska ayaa kuu oggolaanaysa inaad midba midka kale u ciyaarto ciyaaraha dadka kale adiga oo kasbanaya guulahaaga oo kuu badbaadinaya horumarkaaga Steam Cloud.
Qolka fadhiga waa dhul qoys. Taasi waa wax fiican, laakiin ma doonaysid inaad ku aragto ciyaaraha waalidiintaada maktabaddaada. Dhawaan, qoysasku waxay awood u yeelan doonaan inay xakameeyaan cinwaannada la arki karo iyo cidda la daawan karo, iyo sidoo kale astaamo dheeri ah oo u oggolaanaya qof walba oo guriga jooga inuu ka faa'iideysto maktabadaha uumiga ah.
Boqolaal ciyaarood oo waawayn ayaa durbadiiba asal ahaan ka socda SteamOS. La soco ogeysiisyada toddobaadyada soo socda ee ku saabsan cinwaannada AAA ee u imanaya waddankooda Steam sannadka 2014. Helitaanka Diiwaan-gelinta Steam oo dhammaystiran oo ku dhow 3000 oo ciyaaro ah iyo softiweerka kumbuyuutarka adoo adeegsanaya socodka guryaha
In ka badan 50 milyan oo saaxiibo ah
Isticmaalayaasha uumiga ayaa ah kuwa ku ciyaaraya Steam madadaalo. La kulan dad cusub, ka mid noqo kooxaha ciyaarta, sameyso qabiillo, kula sheekeysto ciyaaraha, iskuna mashquuli meelaha kulkulul ee ciyaarta, oo ah xarunta dhammaan kulammada aad ugu jeceshahay.
Awoodda hal-abuurka ah ee isticmaaleyaasha Steam waxay ku soo noolaan doonaan Workshop - sharadkaaga ugu fiican ee loogu daro kuwa ugu fiican ee la heli karo. Halkan waxaad ka abuuri kartaa, ka ogaan kartaa oo ka soo dejisan kartaa alaab aan dhammaad lahayn oo tayo sare leh oo ka kooban isticmaale-abuuray.
Daruur iskudhaf ah
Gaarsiinta waxyaabaha aan xaddidnayn, kaydinta uma baahnid inaad ka walwasho, iyo cusbooneysiinta otomaatiga ah ee wax walba. Ka beddel mashiin illaa mashiin oo ha ka welwelin halka aad uga tagtay ciyaartaada ama keydinta waxyaabaha aad doorbideyso. Wax walba waxay ku jiraan Steam Cloud.
Steam wuxuu ahaa adeeg weligiis isbedelaya tan iyo markii ugu horreysay ee 2003. SteamOS wuxuu sii wadi doonaa inuusan u keenin oo keliya isticmaaleyaasha cusbooneysiinta qiimaha leh ee tooska ah ee abuurayaasha content, laakiin sidoo kale qaababka cusub ee joogtada ah ee Nidaamka Howlgalka laftiisa.
Steam wuxuu joogaa 185 wadan waxaana loo turjumay 25 luqadood. Maaddaama ay tahay barxad caalami ah, Steam, iyo hadda SteamOS, waxay madadaalo u siisaa dadweynaha iyadoon ogeyn xuduudaha.
Marka la soo koobo. Taasi waxay noqon doontaa nidaamka qalliinka ee SteamBox isticmaali doono. Laakiin qaybtani way i xiiseyneysaa:
Deg Deg Deg Deg. Bilaash waligaa!
SteamOS ayaa la heli doonaa isla markaaba sida loo soo dejiyo bilaashka ah ee loogu talagalay dadka isticmaala iyo nidaam bilaash ah oo shati leh oo loogu talagalay soo saarayaasha La soco maalmaha soo socda wixii macluumaad dheeraad ah.
Maxay kula tahay Marka Intel sidaa leeyahay tani waxay noqon doontaa sanadkii LinuxMa waxaa loogu talagalay wax aan shaqo ku lahayn Google? Tani waxay umuuqataa inay tiraahdo haa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Steam OS: Valve wuxuu ku dhawaaqayaa Linux distro u gaar ah
Cilladaha yar yar ee jira waxaa ka mid ah inay tahay OS looguna talo galay in loo isticmaalo "TV-ga iyo qolka fadhiga", taas oo ah, loogu talagalay in loogu isticmaalo kontoroolka fog iyo inay aad u dhib badan tahay in lagu isticmaalo kombiyuutarka. Qof kasta oo isku dayay Sawirka Weyn wuu ogaan doonaa. Kuwa waaweyn, OS-kani wuxuu umuuqdaa mid diirada saaraya SteamBox ugu macquulsan, sidaa darteed kaliya ma lahan doono shuruudo aad u sareeya, laakiin sidoo kale wuxuu ubaahan doonaa xaalado qalab gaar ah oo gaar ah si uu sifiican ugu socdo
Kuwa waaweyn ka mid ah, looguma yeero GlaDOS.
Tijaabiyay Sawirka Weyn waana wax dhib badan in la maro. Waxay iga dhigeysaa inaan dareemo sida Gordon Freeman.
Ray! Ma ahayn wax aan macquul aheyn ... Darawal Wanaagsan !!!
Waan kugu raacsanahay jaalle.
Darawallada wanaagsan iyo waxaan ku faraxsanahay inaan ugu dambeyntii isticmaali karo dekedda HDMI (fiidiyow iyo maqal) anigoon gacan badan gelin.
Uguyaraan waxay baraarujin doontaa xiisaha bulshada guud ee ku saabsan Linux, ugu badnaan ... waxay dethrone win2 ka heli doontaa barxadda ciyaaraha (qofku wuu riyoon karaa hahaha).
Waxay uga badan tahay xafiiltanku xbox iyo ciyaarta, marka loo eego daaqadaha.
Alexander Franco dijo
XBOX wuxuu ka yimid Microsoft OS-kiisuna waa Windows xitaa XBOX ONE wuxuu leeyahay Windows 8 oo ah OS ...
Jawaab Alejandro Franco
Waxaan la yaabanahay sida ay u awoodi doonaan inay dejiyaan dhamaan cayaaraha kaliya ka shaqeeya daaqadaha si looga isticmaalo SteamOs… iyo hadii ay awoodaan… sidee u shaqeyn doonaan?
Wax walba waxay ku sii socdaan OpenGL, haddii mashiinka sawirada loo geeyo Linux oo leh OpenGL ciyaaruhu way shaqeyn doonaan, halkaasna waa kaliya in wax laga beddelo oo wax laga beddelo waxyaabaha qaarkood.
Ku jawaab Drkpkg
Waxay leeyihiin API oo ka dhigaysa kala-guurka u dhexeeya DirectX iyo OpenGL mid fudud, sidaa darteed waxay ciyaaraha u gudbinayaan OpenGL
Ku jawaab Persus
Waad ku mahadsantahay cadeynta labadooda !! Xitaa iyadoo sidaas ah, waa shaqo aad u adag oo leh buugga ballaaran ee ay hayaan ...
Hahahaha Maxay dhihi doonaan hadda kuwa sheegay in Steam loogu talagalay Linux loogu talagalay Ubuntu oo keliya?
Iyaga ayaa mar hore lagu gowrici doonaa madfaca Gauss.
Tan macnaheedu waa hal shay: Nabadeey, Windows.
Macasalaame Windows waxba, Ciyaaraha qulqulka (Taas lafteeda waxaan la yaabanahay sida ay u sameynayaan) iyada oo qaybtaada Windows-ka la daaray iyo Steam-ka.
Waxaan qabaa shaki badan oo ku saabsan sida tani u shaqeyn doonto, laakiin inaan noqdo Valve, waxaan iyaga siiyaa kalsooni weyn oo kalsooni ah (Xumaan ma soo baxeyso gabi ahaanba)
Ku jawaab Nader
Waryaa war !!
Farxad baan la boodayaa !! : _D GRANDE waalka
Distro leh DRM?
Miyaan ciyaari karaa GTA, caqiidada Assasins, wicitaanka waajibaadka madow 2, goobta dagaalka, iyo dhamaan kulamada caanka ah?
Ku jawaab ciyaarta
Dhammaantood maahan, inyar yar waxaan filayaa inay soo bixi doonaan.
Haddii aad soo dejiso qalabka kombuyuutarka ee PS3 oo aad dhigto darawal akhriya oo qoraya cajalladaha Blu-Ray, markaa taasi wey fiicnaan lahayd.
kitty internetka dijo
Waxaan u baahanahay inaan isku dayo !! Waxaan rajaynayaa inay xalliso dhibaatooyin badan oo ay ciyaartooyadu la kulmaan markay isticmaalayaan Linux….
Hada dhamaan ciyaartooyda Linux waxay rabaan inay ku dhisaan "PCstation 5" Steam OS halkii ay ka ahaan lahaayeen windowslerdos.
Weli waxay u baahan doonaan Windows, maxaa yeelay inta badan cayaaraha uumiga waxaa kaliya loogu talagalay Windows, sidaa darteed si aad ugu raaxeysato waa inay jiidaan Winbugs.
Ama iibso PS3 oo arinka waa la xaliyay.
Wanaagsan !!! Waxay ku saleysnaan doontaa Ubuntu 12.04, war wanaagsan.
Xaqiijiyay: Pangolin cayiman wuxuu noqon doonaa jiifka SteamOS.
PS: Mir ama Wayland? Go'aanka Valve wuxuu muhiim u noqon doonaa labada midkood inuu qaato darawalada soo saarayaasha.
Wayland, si aysan ugu qasbin inay ku dhibaateeyaan ku-tiirsanaanta Cannonical (horeyba ugu filnayd inay ku tiirsanaato Jockey).
Kama aqaano Steam, laakiin waan ogahay qaar ka mid ah ciyaaraha Valve waxayna iila muuqdaan kuwo fiican (Nolosha Nolosha iyo Xariirka). Waan ogahay inay war weyn u tahay dad badan inay ku ciyaaraan ciyaarahan caanka ah GNU / Linux maxaa yeelay taasi waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta taageerada qalabka.
Fikradayda ku saabsan:
Waxa ugu fiican ayaa ah in la helo disto khaas ah oo shaqeyn doonta dhibaato la'aan (ama waa inay dhacdo), maxaa yeelay waxay ka timaadaa iyaga.
Laakiin xoogaa waan ka shakisanahay halka ay ku qoran tahay "Isticmaalayaashu waxay awoodi doonaan inay wax ka beddelaan ama beddelaan qayb ka mid ah barnaamijka ama qalabka sida ay doonaan." Waa inaan aragnaa hadhow hoosta liisanka ay sameynayaan, maxaa yeelay ma fiicnaan laheyd taageerayaal badan oo faraxsan inay iskaashadaan nidaamka ka dibna ay horumar ka helaan iyagoon dadaal badan sameynin.
Way fiicantahay inay ugu dambeyntii fiiriyaan GNU / Linux, gaar ahaan dhibaatooyinka darawalnimada ee jira. Laakiin ha ilaawin himilada GNU ee xorriyadda. Ha isku dayin inaad lumiso xorriyaddaas.
Waan arki doonaa waxa dhaca.
Ma noqon doonaa «Bastoolad» caanka ah?
Hadday sidaas tahay, anigu shaki iigama jiro inay tahay arrin waqti ah ka hor intaanay xakamaynin suuqa lagu iibiyo ama ugu yaraan galayo fagaaraha.
Hagaag, SteamOS waxay kumbuyuutar ahaan u dhigeysaa kombuyuutar ahaan qaab muuqaal ah oo loogu talagalay cayaaraha fiidiyowga, sidaas darteedna waxay muujineysaa kala duwanaanshaheeda.
Haddii SteamBox uu dhab noqdo, waxay aad ugu dhowdahay inuu helo astaamo gaar ah marka loo eego PC-ga isla markaana uu leeyahay xaddidaadyo kooban marka la eego horumarinta ciyaarta fiidiyowga marka loo eego Sony Computer Entertainment, Nintendo iyo / ama Microsoft.
Sanadkii Linux? Maalin kasta su'aashan ayaa macno badan samaynaysa.
Waan ku faraxsanahay inaan arko warar sidan oo kale ah.
Ugu dambeyntii waxaan arkaa maalinta aan ku ciyaari karo qaaradda sagaalaad ee Linux.
Waxaan aad u xiiseynayaa saameynta ay ku yeelan doonto soo saarayaasha qalabka guryaha: waa inay bixiyaan alaab la jaan qaadi karta iyo, ama inay u cusbooneysiiyaan darawaladooda sida waalan, ama ay sii daayaan wadayaasha uga tagaya gacanta bulshada.
Isla sidaas oo kale ayeyna ku dambeeyaan inay ka xoroobaan hantiwadaagga Redmond.
Ku jawaab adeplus
Hagaag, waxaan u maleynayaa inay horeyba ujirtay. Soosaarayaasha Nvidia waxay caawinaad u fidiyeen Nouveau markii ugu horreysay taariikhda
Waxa aan la ogeyn waxay ku saleysnaan doontaa Qaybinta, mise waxay sameyn doonaan QAYBIN U gaar ah, taas oo aniga iigu muuqatay tan ugu guuleysiga badan.
Uma maleynayo inay sameeyaan Qaybinta ku saleysan Ubuntu, in kasta oo mid ka mid ah haddii la bilaabayo, ama laga yaabee inay tahay Debian Testing.
Waxay noqon laheyd mid xiise leh haddii ay iyaduna ahayd "Sii-deynta Rolling".
Sikastaba, ilaa ay ahaato, dhammaantood waa mala-awaal iyo aragtiyo, laakiin waxay ku weyn yihiin Linux World, gaar ahaan "gamers", maxaa yeelay hadda Linux waxay noqon doontaa barxad ka badan ansax ama ugu yaraan sida ansax u ah kuwa kale, ugu yaraan cayaaraha Steam .
Waxa aan ugu jeclaa ayaa ah sida wanaagsan ee Steam u adeegsaday Windows, wuxuu ugu isticmaalay inuu isku muujiyo, inuu isku jaangooyo iyo hada in yar oo dhunkashada wejiga iyo wax kale 😉
«Kii birta dila, bir buu dhintaa» ...
"Sharcigu ma qabtay dabin"
halkaas bay ka yidhaahdeen.
Yeynaan isku wareerin, waxaa suurtagal ah inay isu badasho nooc ka mid ah Adroid, oo inkasta oo ay leedahay wax ka mid ah Linux, ma aha oo kaliya Linux.
Uma maleynayo inay xun tahay, qofkii doonaya SteamOS inuu adeegsado, iyo qofkii aan rabin inuu kusii socdo Windows, Linux ama waxkastoo jira.
Gurigeyga waxa ugu xiisaha badan ee arintan ku saabsan waa wiilkeyga, wuxuu rajeynayaa SteamOS, maxaa yeelay xilligan ma rakibo wax aan ahayn LINUX 😉
Aad ayey macquul u tahay inay ku saleysan tahay ubuntu 12.04, maadaama kani yahay kan rasmiga ah ee uumiga linka, marka lagu daro, ku tiirsanaanta sii deynta waxay noqoneysaa qaladkii ugu xumaa ee ay sameyn karaan, iyadoo cusbooneysiin kasta oo xorg ah ay ciyaartooydu awoodi doonaan inay adeegsadaan qalabka loo yaqaan 'distro' , iyo si loo xaliyo u tag tacsiyeynta oo arag sida loo xalliyo.
Waxa ugu fiican ayaa ah in la qaato wax deggan, debianku wuxuu leeyahay software deggan laakiin aad u da 'weyn, sidaa darteed Ubuntu 12.04 waa xulashada ugu macquulsan, waxay leedahay taageero 5-sano ah oo xitaa debian aysan bixin.
Ama sifiican wali, Debian Wheezy. Muddooyinkii u dambeeyay cusbooneysiinta Ubuntu 12.04 ayaa ka ambabaxday Guatemala ilaa Guatemala.
Xaaladda ugu xun, waxay aadi lahaayeen Slackware 14 sababta oo ah sida ugu wanaagsan ee ay u xasilloon tahay.
Waxaan marhore raba inaan iskudayo * ama *
astaamaha cusubi waxay umuuqdaan kuwo aad uxiiso badan
Linux maaha diin